1 USD = 322 ZWL at the rate on 2022-01-18 .
With the currency converter, you can convert 1 United States Dollar to Zimbabwean Dollars and find out how much one united States Dollar is currently worth in Dollars. Also, you can make a reverse calculation and find out the current value of 1 Zimbabwean Dollar in United States Dollars.
Graph of change in 1 United States Dollar to Zimbabwean Dollars rate
Dynamics of the cost changes of 1 United States Dollar (USD) in Zimbabwean Dollars (ZWL)
Compare the cost of 1 United States Dollar in Zimbabwean Dollars in the past with the current price at the moment.
January 12, 2022 Wednesday 1 USD = 322 ZWL - -
January 13, 2022 Thursday 1 USD = 322 ZWL - -
January 14, 2022 Friday 1 USD = 322 ZWL - -
January 15, 2022 Saturday 1 USD = 322 ZWL - -
January 16, 2022 Sunday 1 USD = 322 ZWL - -
January 17, 2022 Monday 1 USD = 322 ZWL - -
January 18, 2022 (today) Tuesday 1 USD = 322 ZWL - -
The cost of 1 Dollar (USD) in Zimbabwean Dollars for a week (7 days) remained unchanged.
December 19, 2021 Sunday 1 USD = 322 ZWL - -
The cost of 1 Dollar (USD) in Zimbabwean Dollars for a month (30 days) remained unchanged.
January 18, 2021 Monday 1 USD = 322 ZWL - -
The cost of 1 Dollar (USD) in Zimbabwean Dollars for a year (365 days) remained unchanged.